Ndụmọdụ maka njem mgbe Covid-19 | Akụkọ Njem
Ọrịa na-efe efe nke Covid-19 kpatara emetụtala mpaghara ndị njem. Mmechi nke ókèala, ịkagbu ọtụtụ puku ụgbọ elu, mmechi nke ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ, ebe ngosi ihe mgbe ochie, ogige ntụrụndụ, ama egwuregwu na ebe nkiri ndị njem ndị ọzọ pụtara maka ọnwa ole na ole nkwụsị nke njem maka ọtụtụ mmadụ. Ka ọ dị ugbu a, nke nta nke nta ọ na-anwa iweghachite ọrụ ahụ tupu nje ahụ ma ọtụtụ ndị bụ ndị nrọ nke ịgagharị ọzọ, mana otu esi eme ya mgbe ha nwetachara? Echefula ndụmọdụ ndị a maka ịgagharị na coronavirus.
1 Usoro nchekwa
1.1 Tupu njem ahụ
1.2 N'oge njem ahụ
1.3 Mgbe njem ahụ gasịrị
2 Kedu mgbe anyị nwere ike ịga njem ọzọ?
Tupu njem ahụ
Ọ bụrụ na enweghị ụdị mgbaàmà ọ bụla ma ị nwere ike ịme njem ahụ Ọ ka dị oke mkpa iji lekọta ịdị ọcha kachasị, iji aka ncha ma ọ bụ gel hydroalcoholic na-akwọ aka mgbe niile ma na-ekpuchikwa ihu mgbe niile na oghere ọha.
Ya mere, mgbe ị na-ezukọta ibu, ọ dị mkpa ịnwe ihe nkpuchi oge niile maka oge dum nke njem ahụ, gel hydroalcoholic nke nwere ike dochie ncha na mmiri mgbe ọ na-adịghị n'aka, yana, n'ezie, temometa na-enye anyị ohere inyocha okpomọkụ nke anụ ahụ. ọ bụrụ na anyị ebido nwee obi ọjọọ.
Ọ dịkwa mkpa ịkpọtụrụ ndị njem. Na mgbakwunye na ọkwa oge ikpeazụ na ndụmọdụ gbasara ọnụọgụ, na Ndụmọdụ Njem nke mba ọ bụla site na Mịnịstrị nke Ofesi ị ga-ahụ ozi gbasara ọnọdụ nchekwa, akwụkwọ dị mkpa iji gaa, iwu mpaghara, ọnọdụ ịdị ọcha, ọgwụ mgbochi dị mkpa, nọmba ekwentị isi nke mmasị na iwu maka ego.
N'echiche a, a na-atụ aro ka ịdebanye aha na Njem Ndị Njem nke Minista nke Mba Ọzọ ka ọ bụrụ na, yana nkwa dị mkpa nke nzuzo, enwere ike iru ya ma ọ bụrụ na enwere nsogbu mberede.
Ebe ọ bụ na n'ọtụtụ mba, ndị ọrịa na-akwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ ma nwee ike ịdị oke ọnụ, yabụ A na-atụ aro ka ị wepụ mkpuchi ahụike nke na-eme ka mkpuchi zuru oke bụrụ ọrịa ma ọ bụ ihe ọghọm n'oge njem ahụ. Insurance mkpuchi ga-enyekwara anyị aka ma ọ bụrụ na ụgbọ anyị efuo, tufuo akpa ma ọ bụ zuo ohi.
N'oge njem ahụ
Mgbe ezumike dịgidere, ọ dị mkpa ịnọgide na-akpachapụrụ anya na ịdị ọcha. Yabụ, n'oge njem ahụ, ị ​​ga-aga n'ihu na-ejigide mmekọrịta mmadụ abụọ na ndị ọzọ, zere imetụ ihe ọ bụla ma ọ bụ arịa ọhaneze aka ma mee ka ọ mara mkpa ọ dị ịnọgide na-akwọ aka gị, na-echefughi ihe nkpuchi ahụ ebe ọha na eze.
N'ihe banyere ọrịa n'oge njem ahụ, na mgbakwunye mkpuchi mkpuchi ahụike, ọ dị mkpa iji nweta ego zuru ezu iji kwụọ ụgwọ maka ihe omume na-atụghị anya ya, ma ọ bụ ego, kaadị kredit ma ọ bụ akwụkwọ ndenye ego ndị njem.
Mgbe njem ahụ gasịrị
Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, ozugbo njem ahụ gafere, ọ dị mkpa iji mechie mkpọchi ụbọchị iri na anọ mgbe ịlaghachisịrị. Ọ bụrụ na ị nwere mgbaàmà ọ bụla metụtara Covid-19 (ahụ ọkụ, ụkwara, ike iku ume ...) ọ ga-adị mkpa ka ị kpọtụrụ ebe ahụike gị.
Kedu mgbe anyị nwere ike ịga njem ọzọ?
Nke a bụ ajụjụ nde dollar, nke onye ọ bụla nwere mmasị njem na-ajụ onwe ya mana ọ nweghị otu azịza ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe metụtara, dịka ọnọdụ coronavirus na ebe ọpụpụ na ebe ọ na-aga. Agbanyeghị, atụmatụ mgbe ọ ga-ekwe omume njem ọzọ bụ ndị a:
Mgbe ị nọ n'ọkwa mba, na Spen, a na-atụ anya na a ga-arụ ọrụ ọzọ na ngwụcha June, n'ime usoro a na-akpọ ọhụụ ọhụụ, njem dị anya ma ọ bụ njem kọntinent nwere ike ichere ruo etiti July. N'aka nke ọzọ, njem njem ga-abụ nke ikpeazụ a ga-arụ ọrụ na nke a ga-ewere ọnọdụ n'ime ọnwa Septemba ma ọ bụ Ọktọba.
N'ọnọdụ ọ bụla, ihe kachasị mma bụ ịgakwuru gọọmentị gọọmentị na isi mmalite ahụike na mba nke mbido na mba ebe ọ na-aga.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Spain bụ otu n'ime mba Europe ndị ọrịa Covid-19 kacha emetụta, ọnụọgụ nke ọrịa efelata belatara izu ndị a. Kemgbe Mee 4, mba ahụ ekewaala n'ụzọ iji tọọ ijeụkwụ nke de-escalation na ngwangwa nke ọha na eze amaliteghachiri onwe ya rue mgbe ọ ruru "ọhụụ ọhụrụ" nke June 21, mgbe enyerela ya ohere igbasa n'etiti Obodo ga-emepe onwe ya ma mepee ala ndị otu so na European Union ma e wezụga Portugal, nke a ga-eme na July 1.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ndụmọdụ maka njem mgbe Covid-19 gasịrị